Iran : Tamberin’ny taona 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2008 21:14 GMT
Tamin'ny volana Aprily 2008 no namoahan'ny Berkman Center for Internet and Society (ivotoeran'i Berkman misahana ny aterineto sy ny [orinasa na] fiaraha-monina) fanadihadiana mahaliana milaza fa manodidina eo amin'ny 60 000 eo ho eo ny isan'ny bolongana iraniana tsara fahana. Misy isan-karazany ny bolongana any Iran, ary tamin'ny taona 2008 dia mahita atao, mihetsiketsika ary mavitrika any amin'ny sehatra mahaliana azy sy amin'ny fombany azy avy izy ireo. Indreto ary atolotra anareo ny sombiny nahaliana tany amin'ny tontolon'ny bolongana Iraniana any:
Fananahana, lainga, vola & YouTube
Tamin'ny volana jona dia nandrakitra sy namoaka lahatsary nampiseho ny filoha lefitry ny sekoly, Atoa Hassan Madadi, nisy azy ny mpianatry ny anjerimanontolon'ny Zanjan any avaratra andrefan'i Iran. Hita tao amin'ny lahatsary ary efa mivaha avokoa ny bokotry ny akanjon'ingahy filoha lefitra, ary tahaka ny hiomana hanao firaisam-batana amina mpianatra vehivavy iray izy. Maro ny vohikala sy bolongana Iraniana maro no nanambara fa efa nanaitra ny fikambanan'ny mpianatra islamika ao amin'ny anjerimanontolo ny tovovavy noho ny faneren'ingahy filoha lefitra azy hanao firaisana aminy. Voatery niala tamin'ny asany ingahy filoha lefitra satria tsy azony nolavina ny fiampangana, isaorana ny YouTube sy ny bolongana.
Toe-draharaha hafa indray tamin'ny volana jona ihany, Mpikambana tao amin'ny vaomieran'ny fanarahamaso sy ny famotorana teo aloha, Abbas Palizdar, no niampanga mpitondra fivavahana ambony ho manao kolikoly nandritra ny kabary nataony tao amin'ny anjerimanontolon'ny Booali any Hamadan. Navoakany tamin'ny antsipiriany ny raharaha maloto sy ny fihoaram-pefy iampangany ny mpitarika politika fantadaza, ka tafiditra homanao izany koa ny Ayatollah sasany manam-pahefana lehibe. Niely haingana dia haingana tany amin'ny bolongana sy ny YouTube izay nolazainy, saingy nitroatra ny mpitondra ka nisambotra azy. Mbola tsy nandeha ny fitsarana hatramin'izao.
Mpamaham-bolongana Maitso: Mamonjy ny voajanahary
Zavadehibe ho an'ny mpamaham-bolongana Iraniana ny tontolo iainana ary maro tamin'ny mpamaham-bolongana iraniana no nisongadina tany Iran nitolona sy niaro ho amin'ny tontolo maitso.
Tamin'ny 5-10 Jolay, no nanapahan'ny mpamaham-bolongan'ny tontolo maitso hanao fanentanana hampahafatatra ny olona sy ny mpamaham-bolongana hafa ny hatsaran'ny faritra (voajanahary) mando sy ny loza mananontanona azy ireny. Namoaka ny hatsaran'ny faritra mando nopihana tany Anzali, mifandrafy amin'ny fandravana azy, tamin'ny alalan'ny saripikamaromaro ry zareo tamin'izany fotoana izany.
Mpamahambolongana Islamista: Tsy mila fifanarahana amin'i Isiraely
Misy dia misy ny mamaham-bolongana Iraniana no tsy mahatanty demaokrasia na ny fanarahana ny fanaon'izao tontolo izao, ary maro amin'izy ireny no islamista. Tamin'ny volana aogositra dia oakiana mafy ny filoha lefitry ny fizahantany sady talen'ny fikambanana mpandala ny kolo sy lovantsaina Iraniana , Atoa Esfandiar Rahim Mashai, raha nilaza fa “sakaizan'ny mponina manerantany i Iran, eny fa na dia amin'ny Isiraeliana sy ny Amerikana aza”. Efa niteny izany ihany izy herinandro vitsivitsy lasa izay fa “nanitsy” ny teniny fa amin'ny ilazany ny “vahoaka Isiraeliana”, dia tsy tafiditra ao anatin'izany ny Sionista sy ny Jiosy mpifindra monina. Esmail, mpamaham-bolongana Islamista mipetraka any Iran, dia nanoratra fa nisy vondrona mpianatra Islamista nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny fikambanana mpandala ny kolo sy lovantsaina Iraniana tany Teheran ho fanoherana an'ingahy filoha lefitra. Namoaka ny sarim-pihetsiketsehana maro misy ny sora-baventy tahaka ny “Mandehana monina any amin'ny isiraeliana maha-te-ho-tia” sy ny “Mitaky asa revolisionera ny maha-revolisionera fa tsy alonalona (nofinofy andikana ny teny illusion)”.
Mahatsiaro izay tian'ny besinimaro ny mpamaham-bolongana
Soa ihany fa tsy resaka politika ihany no amahanam-bolongana any. Nahatsiaro an'i Mohsen Rasoulov, mpaka sary mazoto, artista, mpanao saritatra sady mpamaham-bolongatsary iray tamin'ireo 68 maty nandritra ny fianjeran'ny Boeing 737 tamin'ny faran'ny volana Aogositra ny mpamaham-bolongana iraniana tamin'ny volana septambra.
Famonoana ho faty raha mamaham-bolongana?
Tamin'ny volana Jolay, dia nanambara ny governemantan’ Iran izay efa nanenjika mpamaham-bolongana sy nanagadra ny sasany tamin'izy ireny, fa nandany ny hametrahana volavolan-dalàna “hanamafisana ny sazy amin'ny fanakorontanan-tsaina ny fiaraha-monina” ny mpikambana ao amin'ny Antenimiera. Nanampy ary ny fitsipika fa tafiditra ao anatin'ny lisitra mahavoaheloka ho faty ny “fametrahana vohikala sy bolongana mandrisika ny kolikoly, fivarotan-tena ary ny fihemorana amin'ny finoana”.
zon'olombelona # zon'olombelona
Marina tokoa fa misy ny mpamaham-bolongana no manohana ny zon'olombelona, tahaka ny tamin'ny fisamborana an'i Hossein Derakhshan tamin'ny volana lasa teo. Saingy mangina kosa izy ireo amin'ny raharaha sasany rehefa sendran'izay tsy malaza ilay olona. Tamin'ny volana Jolay dia nosamborina ny mpitondra fivavahana iray antsoina hoe Ali Reza Jahanshahi rehefa avy nanao fihetsiketseham-panoherana ny kolikoly. Mpamaham-bolongana Islamista vitsy monja no niresaka ity raharaha ity fa tahaka ny tsy niraharaha kosa ny hafa. Noho izy mpitondra fivavahana angamba no antony.
Vao haingana kokoa, voaheloka higadra 36 volana ny mpamaham-bolongana Iraniana Omid Reza Mirsayafi fa misy fanalam-baraka ny mpitondra fivavahana iraniana sy fanaratsiana ny Repobilika Islamista ny bolongany. Tsy dia niraharaha izany loatra ny mpamaham-bolongana sady tsy nanao fanentanana ny amin'ny hanafahana azy ihany koa, tahaka izay efa nahazo ny mpamaham-bolongana hafa efa migadra rahateo.